…अनि देउवाविरुद्ध लागेँ- कांग्रेस महामन्त्री « AayoMail
…अनि देउवाविरुद्ध लागेँ- कांग्रेस महामन्त्री
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा इतरको समुहबाट एक जना मात्र सभापतिको उमेदवार हुने बताएका छन्।
बीपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्चले ३८ औं बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले आफूहरुको समुहबाट को सभापतिको उमेदवार बन्ने भन्ने छलफल भइरहेको पिन बताए। 'कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने सबैजना म होइन, हामी भनेर लाग्नुपर्छ' उनले भने 'पार्टी सभापति हुने इच्छा सवैलाई होला तर, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेकाले सभापति देउवा इतरको पक्ष एक ठाँउ हुनुपर्छ।'
उनले कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनका लागि सवैले त्यागको भावना देखाउने बेला आएको पनि बताए। महाविधेशनको मिति तय भइसकेपछि महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्नका लागि मात्र सभापति देउवाले विभाग बनाउन लागेको आरोप लगाए।
'महाधिवेशन हुनका लागि मात्र ८ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा विभागमा नियुक्त भएका साथीहरुले के काम गर्न सक्छन् ?' कोइरालाले भने, 'मैले सभापति देउवालाई सधै सहयोग गरेँ तर, सभापतिले पार्टीमा एकलौटी गर्न छोड्नुभएका र, सभापतिका विरुद्धमा लाग्न बाध्य भएँ।'
महामन्त्री कोइरालाले अहिले नेकपासंग प्रतिष्पर्धाका लागि कांग्रेस एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले कांग्रेसलाई एकतावद्ध बनाउनका लागि अहिले नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।
कोइरालाले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका कारण गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै ठिक भन्ने जमात बढ्न थालेको टिप्पणी गरे।
कोइरालाले राष्ट्रपति भण्डारीको क्रियाकलापका कारण उनी देशको नभई नेकपाको मात्र राष्ट्रपति भएको सन्देश गएको बताए।
उनले आम नागरिकमा कमसेकम राजा त तटस्थ हुन्थे, भन्ने मानसिकता विकास हुन थालेको बताए। 'त्यो अहिलेका राष्ट्रपतिको व्यवहारका कारण हो' उनले भने।
कोइरालाले नेपाली कांग्रेस र मुलुक अब बीपी कोइरालाले देखाएको राजनीतिक आर्थिक तथा समाजिक परिवर्तनको बाटोमा हिड्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीलबहादुर धर्ती, बद्री पाण्डे गगन थापाले बीपी कोइरालाको योगदानको चर्चा गरेका थिए।